Ogaden News Agency (ONA) – Lax walba shilalkay is-dhigto umbaa lagu qali
Lax walba shilalkay is-dhigto umbaa lagu qali
Posted by ONA Admin	/ January 26, 2012
Wariyaha noo dhex fadhiya Jigjiga wuxuu na soo gaadhsiiyay dhibaatooyin farabadan oo haysta gumaysi agoolka oo maalinba maalinta ka dambaysa ay xaaladooda sii xumaanayso. Arimaha ugu daran ee socda waxaa ka mid ah dhaqan xumada gumaysiga Itobiya oo marka uu doonayo inuu raaligaliyo maamulka Oromada ee dabadhilifka u ah EPRDF-ta ku laaluusha bahdilaada uu ku hayo daba-dhilifyada Somaliyeed ee agihiisa jooga.
Waxaan horey u ogayn in degmooyin badan oo deegaan ahaan iyo taariikh ahaanba ka tirsanaa Ogadenya loo xukumay maamul ku sheega Oromada, halkaasoo dadkii shacabka ahaa ee deegaanka ay dhibaato labada dhanba ah ay ku haysato.
Waraka hadda ugu dambeeyay ee naga soo gaadhaya meela kala duwan ayaa sheegaya in shir dhawaan ka dahacay magaalada Harar oo loo qabtay jawaasiista labada maamul ku sheeg ee Oromada iyo kuwa jooga Jigjiga. Shirkaa ayaa lagu tilmaamay in lagu qiimaynayo shaqadooda. Waxaa kaloo shirka lagaga hadlayay khilaaf la sheegay inuu soo kala dhex galay labada sirdoon oo la xidhiidha xadka uu jaasuus walba uusan ka soo gudbi karin. Waxaa ka dhashay in shalay lagu xidhay goobtii lix nin oo ka mid ahaa jawaasiistii Somalida ka socday oo si fool xun oo istaahilkooda ah loola dhaqmay. Shan ka mid ah kuwii shirka loogu yeedhay oon magacyadooda helnay ayaa waxay kala yihiin;
4-Axmed Cabdulaahi Macalin
Warar kale oo iyagana naga soo gaadhaya meela kala duwan oo ka mid ah gudaha dalka ayaa sheegaya inuu jiray bishan khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay maxaysatadii Hawaarinta iyo madaxdoodii kaasoo sababay inay ka baxsadaan ciidamo badan oo ka mid ahaa maleesiyadaa, gaar ahaan markii CWXO ay ka heleen amaan ah inay dhex mari karaan hadday baxsad yihiin. Waxaa bishan gudaheeda ka baxdsaday isu gayn 25 askari oo meela kala duwan ka goostay. Faahfaahin dheeraad ah ayaan ka soo dayn doonaa arimahaa.